किम जोङ उनले किन आफ्ना नागरिकसँग रुँदै माफी मागे ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
किम जोङ उनले किन आफ्ना नागरिकसँग रुँदै माफी मागे ?
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले पहिलो पटक आफ्नो देशका नागरिकसँग माफी मागेका छन् । गार्जियनको रिपोर्ट अनुसार उनले महामारीको समयमा मानिसको साथ हुन नपाएको कारण माफी मागेका हुन् ।
आफ्नो पार्टीको ७५ औं स्थापना दिवसमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले भावुक हुँदै यस कुरालाई स्वीकार गरेका थिए र उनले मानिसहरुको विश्वासमा आफु सोचेजस्तो प्रस्तुत हुन नसकेको कारण माफी मागेको बताएका छन् ।
रिपोर्टको अनुसार किमले आफ्नो भाषणको क्रममा आफ्नो चस्मा फुकाले र आँशु पुछे । आफ्नो पुर्खाद्वारा गरिएको महान कार्यहरु र वंशको कुरा गर्दै उनले भने, ‘यद्यपि मलाई यस देशको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेद्वारी सुम्पिएको छ र किम २-सुंग र किम जोङ-इलको कारण सम्भव भएको छ । मलाई मानिसहरुले विश्वास गरेको धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरे प्रयास र इमान्दारिता, मानिसहरुको जीवनमा आउने कठिनाइहरुसँग छुटकारा दिलाउनको लागि पर्याप्त छैन ।’
आफ्नो भावनात्मक भाषणमा किमले यस समय कोरोना भाइरसको कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सामना गरिरहेको विश्वको बारेमा कुरा गरे र उनले दक्षिण कोरियाको साथमा सम्बन्ध सुधार गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । उनले अमेरिकामाथि कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष आलोचना गरेको अस्विकार गरे ।
शनिवार उत्तर कोरियाले आफ्नो नयाँ मिसाइलको प्रदर्शन गरेको थियो जुन एक विशाल सैन्य परेडमा उत्तर कोरियाको ज्ञात अन्तरमहाद्वीपीय बेलिस्टिक मिसाइहरु (आईसीएमबीएस) भन्दा पनि ठुलो रहेको छ । परेड पछि दक्षिण कोरियाले आइतवार चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र एक पटक पुन उत्तर कोरियासंग आफ्नो पछिल्लो अशस्त्रीकरणको सम्झौताको पालना गर्न आग्रह गरेको थियो ।
दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्रालय अनुसार, ‘उत्तर कोरियाले हतियार प्रदर्शन गरेको थियो जसमा एक नयाँ लामो दुरीको बेलिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका रहेको छ । उत्तर कोरियाले आफ्नो बयानमा सन् २०१८ को अन्तर(कोरियाली सम्झौताको माध्यमबाट शत्रुतापूर्ण काम गरेको उद्देश्यको बारेमा सम्झना गराएको छ ।’